AmaZayoni achitha eyokusayina uMandla Masango | News24
AmaZayoni achitha eyokusayina uMandla Masango
Johannesburg – Impumalanga Black Aces ichithe imibiko esisabalele ngokuthi isisayine obengumdlali weKaizer Chiefs uMandla Masango ngokusho kombiko.
Ngokubika kweSoccerLaduma ngemuva kokuba Amakhosi ememezele ukuthi lo mdlali oneminyaka engu-25 ubudala ngeke esaba yingxenye yeqembu kusabalale imibiko ethi usesayine namaZayoni.
UMasango uyingxenye yeqembu leBafana Bafana elizodlala umdlalo wokuhlunga we-African Cup of Nations neGambia ngoMgqibelo eMoses Mabhida Stadium nowobungani ne-Angola ngomhlaka 16 kuJuni eCape Town Stadium.
OLUNYE UDABA: Aseqinisekisiwe azogadulisana nePirates kweye-CAF
Kubikwa ukuthi ngokwe-website yeSouth African Football Association uMasango ubebhaliswe ngomdlali we-Aces.
USihlalo wamaZayoni uMario Morfou ukuphikile ukuthi sebesayile lo mdlali.
“Asikamsayini uMandla. Angazi ukuthi i-SAFA ikuthathaohi lokhu,” esho.
Kubikwa ukuthi uMasango ufuna izizumbulu zomholo nokwenza kube nzima ukuthi asheshe athole iqembu elizomsayina.